Zimbabwe starts administering China’s Sinopharm vaccines | The Star
A nurse gives a shot oof China's Sinopharm vaccine to Zimbabwean Deputy President Constatino Chiwenga, right, at local hospital in Harare, Thursday, Feb, 18, 2021. Chiwenga become the first person in the country to receive the jab marking the first phase of the country's vaccination campaign.
HARARE, Zimbabwe - Zimbabwe started giving COVID-19 vaccinations Thursday, with Vice-President Constantino Chiwenga volunteering for the first jab at a hospital in the capital, Harare.
Zimbabwe is starting its rollout with China’s Sinopharm vaccine and Chiwenga said he took the first shot to “exhibit the government’s confidence“ in the inoculation.
Zimbabwe, like many other African countries, initially recorded low numbers of COVID-19 in the first months of the pandemic but recently experienced a spike in cases. There are fears that a new, more infectious variant of the virus came to the country when scores of thousands of Zimbabweans living in neighbouring South Africa returned home for the holiday season.